Shabaab oo ka hadlay dabkii qabsaday Suuqa Bakaaraha | Baydhabo Online
Shabaab oo ka hadlay dabkii qabsaday Suuqa Bakaaraha
Ururka Al Shabaab ayaa waxa ay ka hadleen dabkii maalin ka hor qabsaday Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, kadib markii Salaadii Subax uu Suuqa dab ka kacay, kaasi oo ka dhashay Khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed.
Sheekh Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) Wakiilka Al Shabaab u qaabilsan Gobolka Banaadir ayaa sheegay dhacdadii gubashada Suuqa Bakaaraha inay aheyd arin naxdin badan oo soo gaartay dadka Somaliyed, wuxuuna sheegay Shabaab inay la qaybsanayaan murugada Bulshada Suuqa Bakaaraha.
Waxa uu tilmaamay illaa hadda inaysan sifo gaar ah ku micneyn karin dabka ka kacay Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, kaasi oo Khasaare kala duwan geystay, balse wuxuu sheegay inay jiraan dad ku farxaayo khasaaraha soo gaaray dadkaasi Somaliyed.
“Horta sida aan ognahay oo aan cadeynayno saq dhexe ayuu suuqa gubtay oo dadka ay jiifaan, xilligaasi dadka mehradahooda marka ay rawaxayaan korontadooda waa ay dansadaan, xilligaasna shah la karinaayay iyo dab shidnaa ma jirto, balse anaga illaa hada ma hubno oo ma dhihi karno qadiyadaasi cadowga ayaa si gaar ah uga dambeeyay.” Ayuu yiri Sheekh Cali Jabal.
“Anaga waan hubnaa dhibaatada dhaceysa inay ka dambeeyaan gacmo shisheeye iyo dad cadow ah, balse qadiyadaan iyada ah waxa ay u baahan tahay baaritaan dheeri ah, laakiin si guud dalka cadow ayaa haysto.” Ayuu hadalkiis sii raaciyay Sheekh Cali Jabal.
Illaa hada ma jirto cid si cad u sheegtay sababtii rasmiga aheyd ee ka dambeysay dabkii ka kacay Suuqa Bakaaraha, marka laga soo tago in dabkaasi uu ka dhashay koronto.
Khasaare maaliyadeed iyo mid nafeed ayaa ka dhalatay dabkaasi ka kacay Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, iyadoo labo ruux ay ku geeriyoodeen, halka dhaqaale badana uu ku gubtay.